Qarbud iyo Qarqoosh iyo Quwad Sheegasho, Meel Kuma Laha Garashada Wacan | Salaan Media
Qarbud iyo Qarqoosh iyo Quwad Sheegasho, Meel Kuma Laha Garashada Wacan
Waxa la leeyahay Baarlamaankii Somaliland ayaa maanta fadhi ka yeeshay (02/05/2019) xaaladda degdegga ah ee madaxweynahu ku soo rogay gobolka Sanaag. Lagu ye waxa fadhigaa soo xaadiray 107 xubnood oo labada gole-ba ka tirsan. Muhiimadda fadhiga ka garo in labadii gole goob la isugu keenay.
Waxa warku intaa ku sii daray in iyadoo lagu dhex jiro “cod-u-qaadista ansixinta xaaladda degdegga ah ee gobolka Sanaag”, oo ay markaas, 40 xildhibaan gacanta u taageen aqbalka mooshinka horyaala fadhiga, ayuu Guddomiyihii Golaha wakiiladu, Xildhibaan Bashe, ku dhawaaqay in fadhigu xidhan yahay. Akhriste miyaan kuugu celiyaa: cod-qaadistii oo lagu gudo jiro ayuu kala diray fadhigii. Waad fahamtay baan filayaa. Yaab!
Waynu garan lahayn haddii aan fadhiga la isugu yeedhi lahayn-ba, malaa waad fahmi lahayd haddii aan cod-ba la qaadi lahayn-ba; laakiin cod-bixintii oo dhexda lagaga jiro ayaa la laalay fadhigii gaarka ahaa ee labada gole. Cajiib. War maxaa tidhi!!
Mana aha markii ugu horayasay ee sidaasi ka dhacado Somaliland. Xasuus dib ugu noqo in bishii Janayo 2019, xubno ka tirsan Golaha Guurtida loo diiday inay soo galaan iyadoo markaa cod loo qaadayey muddo-kordhinta Golaha Wakiilada.
Mar kale xasuus dib ugu noqo dhacdadii horraamihii bishii Febrayo 2017, markii codka loo qaadayey saldhigga military ee Imaaraadka ee Berbera; taas oo xubno ka tirsan golaha wakiilada gacanta loola tagay, bannanka loo tuuray, loona taxaabay shookiga, si aanay uga codayn ansixinta saldhigga military.
Dhacadooyinka kuwaa la mid ka ahi, ama kuwo salsalaaba, waa badan yihiin. Akhriste adigu ku darso.
Marka maxaa kaaga soo dhex baxay? Waxay u dhuranaysaa waa dawlad hor qaawan garashada qiimaha awoodda qancinta (power of persuasion), aaladda keliya ee ay qiimeeyaan waa “quwadda xoogga”, ka garo “xaaladda degdegga ah” ee lagu soo rogay gobol keliya, sababo cad-na lala shir iman.
Haddaba, kaa waran tixgelinta ay madaxda Somaliland u hayso dimuqraadiyadda ay hadh iyo habeen ku faanaan? Ka garo dhacadada maanta ee baarlamaanka iyo kuwii ka horreeyey, oo ku astaysan: ixtiraam la’aanta ay dimuqraadiyadda u hayaan. Malihii waa muuqaal-beeneed (façade) la tuso Qarbiga lacagta laga dhurto.
Dimurqaadiyaddu ka ballaadhan waa la i doortay. Waxay leedahay qiyamo faro-badan oo ay ugu horayaso is-qancintu. Qarbud, Qarqoosh iyo Quwad sheegasho meel kuma laha garashada wacan, diinta Ilaahay iyo dimuqraadiyadda Somaliland sheegataba.